राजधानीवासीका लागि खुसीको खबर ! प्रधानमन्त्रीको ठा’डो निर्देशन पछि अब यस्ता दृश्य देखिने छैनन् ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/राजधानीवासीका लागि खुसीको खबर ! प्रधानमन्त्रीको ठा’डो निर्देशन पछि अब यस्ता दृश्य देखिने छैनन् !
राजधानीवासीका लागि खुसीको खबर ! प्रधानमन्त्रीको ठा’डो निर्देशन पछि अब यस्ता दृश्य देखिने छैनन् !
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्य सुरु भएको छ । दुई महिनाभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिनेछ । यो अभियानअन्तर्गत मङ्गलबार कोटेश्वर–चाबहिल सडक खण्डमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भयो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्सिर ९ गते सम्पन्न चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सडकको खाल्डाखुल्डीको गीत कहिलेसम्म सुन्ने हो’ भन्दै सडकको खाल्डाखुल्डी चाँडो पुर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
यस्तो छ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवनको प्रस्तावित डिजाइन